Vaovao - Vokatry ny virus covid-19 amin'ny latabatra NBR
NBR latex dia mampiseho fananana tena tsara toy ny fanoherana ny solika sy ny akora simika hafa izay mahatonga azy ireo tena irina amin'ny famokarana fitaovana fiarovana indrindra fonon-tànana ho an'ny sehatry ny indostria sy ny fahasalamana. Ity fidirana an-tsokosoko ity dia andrasana hamorona fotoana be dia be ao amin'ny tsenan'ny latina vita amin'ny goma butadiène mandritra ny vanim-potoana mialoha.
Ny fidiran'ny indostria any amin'ny faritra an-dalam-pandrosoana miaraka amin'ny fahatsiarovan-tena momba ny fiarovana ny mpiasa dia hitondra anjara biriky amin'ny fitomboan'ny tsena mandritra ny vanim-potoana fandinihana. Ankoatr'izay, ny fampitomboana ny fampiasana fonon-tànana amin'ny indostrian'ny simika, taratasy ary ny sakafo dia mety hampisondrotra ny tsenan'ny latina vita amin'ny rubber getadiene butadiène mandritra ny vanim-potoana.
Ilay viriosy COVID-19 miely erak'izao tontolo izao dia niteraka fiakaran'ny fandaniam-pahasalamana izay hampisondrotra ny fangatahana fonon-tànana latina NBR mandritra ny vanim-potoana. Ny COVID-19 dia nitarika ny fampiakarana ny fonon-tànana ho fiarovana ny tenany manokana ary noho izany dia antenaina hitondra fitomboan'ny fitakiana tsena latinina butadiène vita amin'ny robina amin'ny taona 2020.
Ny fitakiana latsa-bato NBR ho an'ny indostrian'ny mpampiasa farany ny indostria sy ny sakafo dia antenaina hijanona ambany mandritra ny vanim-potoanan'ny fanidiana amin'ny fiandohan'ny taona 2020, kanefa, ny indostrian'ny fahasalamana dia andrasana hampiseho fangatahana avo lenta mandritra io fotoana io ihany.
Ny fitomboan'ny Asia Pacific dia vinavinaina hitombo amin'ny avo indrindra amin'ny CAGR mandritra ny vanim-potoana mialoha. Ny fisondrotan'ny fahafaha-mitombo ataon'ny mpanamboatra lehibe miaraka amin'ny fampitomboana ny fandaniam-pahasalamana dia mety hitarika ny tsenan'ny latina vita amin'ny rubber nitradi butadiène mandritra ny fe-potoana voatondro 2020-2026. Malezia, Thailand, ary Shina dia mandray anjara betsaka amin'ny fitomboan'ny tsena. Amerika Afovoany Atsinanana sy Amerika Latina dia andrasana hampiseho fitomboana kamo mandritra ny vanim-potoana mialoha. Ny isan'ny mpanamboatra latina NBR any amin'ny faritra sy ny fiankinan-doha amin'ny importa dia miteraka fitomboana miadana. Ny orinasa latina afovoany atsinanana NBR dia vinavinaina hitombo amin'ny CAGR somary maherin'ny 3% mandritra ny fotoana fanombanana. (Hoy ny Global Market Insights Inc.)